गृह औषधि सुरक्षा मार्गनिर्देशन kids कसरी बच्चाहरू र घरपालुवा जनावरहरू सुरक्षित राख्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी औषधि बनाम मित्र खेलहरु कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार, कल्याण स्वास्थ्य प्रेस समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> गृह औषधि सुरक्षा मार्गनिर्देशन kids कसरी बच्चाहरू र घरपालुवा जनावरहरू सुरक्षित राख्ने
गृह औषधि सुरक्षा मार्गनिर्देशन kids कसरी बच्चाहरू र घरपालुवा जनावरहरू सुरक्षित राख्ने
औषधीहरू शक्तिशाली पदार्थहरू हुन् जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा आमूल सुधार गर्दछ। तिनीहरूसँग पनि चोटपटक गर्ने शक्ति छ जब गलत रूपमा प्रयोग गरेको छ वा गलत हातहरूमा।
अभिभावकको रूपमा तपाईले जहिले पनि यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि बच्चाहरू जिज्ञासु र प्राकृतिक अन्वेषकहरू हुन्, मेरी सुवेनी, आरएन भन्छिन्, प्यारेन्टिंग वेबसाइटका लागि चिकित्सा सल्लाहकार। आमा सबैभन्दा मनपर्दछ । तिनीहरूले कुनै दराज वा उनीहरूले गर्न सक्ने क्याबिनेटमा हेर्छन्। घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। तिनीहरू जिज्ञासु पनि हुन सक्दछन् र आश्चर्यजनक रूपमा चलाक हुन सक्छन् ती स्थानहरूमा पुग्नको लागि जुन तपाईंलाई लाग्छ उनीहरूलाई थाहा छैन वा तिनीहरू पुग्न सक्दैनन्।
बच्चाहरु र घरपालुवा जनावरहरु के खाने को लागी ठीक छ के हैन र बुझ्दैनन्। उनीहरूले तपाईलाई गोली लिने र निलिरहेको देखे, त्यसोभए उनीहरू किन लिनुहुन्न?
र यदि तपाइँका बच्चाहरू वा घरपालुवा जनावरहरू वास्तवमा गर्नुहोस् औषधि आवश्यक छ, तपाईंले नर्सको भूमिका लिनुपर्नेछ र तिनीहरूलाई दिनुहोस्। बिभिन्न औषधिहरूलाई बिभिन्न खुराकको आवश्यक पर्दछ, र बिभिन्न समयमा प्रशासित गर्नु आवश्यक छ। अस्पतालहरूमा पनि, गल्तीहरू हुन्छन्।
चाहे उनीहरूको आफ्नै कौतूहल वा तिनीहरूको जीवनमा वयस्कले गरेको गल्तीबाट, करीव ,000०,००० बच्चाहरु, र असंख्य घरपालुवा जनावरहरू, आपतकालीन कोठाहरूमा प्रत्येक वर्ष आइपुग्छन् किनकि उनीहरूले दुर्घटनावश औषधी सेवन गरे।
राम्रो घर औषधि सुरक्षा अभ्यास अभ्यास तपाईं एक डरलाग्दो अनुभव छैन, र सम्भावित जीवन परिवर्तन, अस्पतालको यात्रा अनुभव गर्न सक्दछ।
घरको औषधि सुरक्षा भनेको के हो?
गृह औषधि सुरक्षा भनेको यो सुनिश्चित गर्ने अभ्यास हो:
मानव / जनावर जो औषधी तोकिएउटाो हो त्यो मात्र लिन्छ।
मानव / जनावरले औषधी लिन्छ जस्तो गरी उनीहरूको मेडिकल पेशेवरको मनसाय छ।
गृह औषधि सुरक्षाले तपाईं, तपाईंको बच्चाहरू र घरपालुवा जनावरहरूलाई हानिबाट बचाउँछ।
औषधी सुरक्षा किन महत्त्वपूर्ण छ?
यस अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू , प्रतिकूल औषधी घटनाहरू (ADEs) ले प्रति वर्ष १3 लाख भन्दा बढी आपतकालीन कोठा भ्रमण गर्दछ। ती मध्ये, प्रति वर्ष ,000 350०,००० मानिसहरु अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्। ADE हरू हाम्रो स्वास्थ्य सेवा लागत प्रति वर्ष $ billion. billion बिलियन अनुमान गरिएको छ।
किन यी घटनाहरू यत्तिको बारम्बार हुन्छन्? सरल शब्दमा भन्ने हो भने, नयाँ, सहयोगी औषधिहरूको परिचय भनेको हामी अधिक औषधी लिइरहेका छौं। जब हामीसँग अधिक औषधीहरू लिन (वा बच्चा वा घरपालुवा जनावरलाई दिन) हुन्छ, हामीसँग गल्तिले गलत औषधि वा गलत डोज प्रयोग गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
फ्याँक्न को लागी कुन औषधि लिने
औषधि सुरक्षाका लागि R R के के हुन्?
औषधि सुरक्षाका लागि R आरको ​​अनुसरण गर्नु उत्तम तरीकाले यो सुनिश्चित गर्नु उत्तम हुन्छ कि तपाईले बच्चा र पालतु पशुलाई उनीहरूलाई औषधी दिँदा गल्तीले हानी गर्दैनन्।
अस्पतालहरूले यी सटीक चरणहरू पालना गर्दछन् जब उनीहरू बिरामीहरूलाई औषधि दिन्छन्।
जहाँसम्म तपाई निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईले पिलको बोतल समात्नु भएको छ जुन तपाईले छोड्नु भएको थियो, घर भित्र कोहीले बोतलहरू वरिपरि सार्यो। पिलको बोतल हेर्नको लागि एउटा बुँदा बनाउनुहोस्, त्यसपछि औषधिको नाम ठूलो स्वरले पढ्नुहोस्।
प्रतिकूल औषधीको घटनाहरूको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू अनुचित खुराकहरू दिएर आउँछन् — सामान्यतया जब व्यक्तिहरू औषधि रकम गलत अर्थ लगाउँदछ वा मिसमेल गर्दछन्।
डोजि p्ग पिल्स पर्याप्त सरल हुनुपर्दछ: मात्र रकम डबल-जाँच गर्नुहोस्। कहिलेकाँही आधा गोलीहरू बच्चा र घरपालुवा जनावरहरूलाई दिइन्छ। यो स्पष्ट रूपमा बोतलमा चिन्ह लगाउनु पर्छ।
तरल औषधिहरू अधिक चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ किनकि तपाईले आफैं रकम नाप्नु पर्ने हुन्छ। यी नुस्खाहरू कहिलेकाँही कम परिचित मेट्रिक उपायहरू (मिलिलिटरहरू) को साथ आउँछन्।
औषधिको साथ आएको मापन उपकरणको प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्, टोरेनि ह्यामिल्टन, आर एन, प्यारेन्टिंग सूचना साइटका संस्थापक भन्छन मातृत्व। Com । यदि औषधि मापन उपकरणको साथ आउँदैन भने, लेबल गरिएको सिरिंज वा कप सटीकता सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिनु पर्दछ, उनी भन्छिन्। अविभावकहरू नाप्नका लागि चम्मचहरू प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ।
किनभने विभिन्न औषधीहरू बिभिन्न चीजहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, यसले यो बुझ्दछ कि तिनीहरू विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरूमा उत्तम काम गर्दछन्। तर यसले प्रशासकिय औषधिलाई भ्रमपूर्ण बनाउँदछ।
केही औषधिहरू दिनको एक पटक लिइन्छन्, अरूहरू बिहान सबेरै र राती लेट, र अझै अरूहरू, लगातार दिनभरि। यी निर्देशनहरू पालना गर्दा तपाईंको बच्चा वा घरपालुवा जनावर छिटो हुन्छ। दुर्घटनापूर्वक समय गडबडी गर्दा उनीहरूलाई नराम्रो बनाउन सक्छ।
उत्तम समाधान लिखित औषधि तालिका हो। कालक्रमानुसार तल लेखिएको सबै चीजले तपाईंलाई गल्तीहरूबाट बच्न मद्दत गर्दछ। यदि त्यहाँ औषधि प्रशासन गर्ने धेरै व्यक्ति छन् भने, एक मुद्रित तालिकाले सबैले समान जानकारीको साथ काम गरिरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।
यदि तपाईंलाई औषधिहरू कहिले व्यवस्थापन गर्ने भनेर सम्झन मद्दत चाहिएमा, समय तालिकामा तालिकाबद्ध गरिएको बेला तपाईंको सेल फोनमा अलार्महरू सेट गर्नुहोस्। केही मिनेट सेटअपले तपाईंलाई औषधीहरूको एक खुराक हराउनबाट बचाउन सक्छ तपाईंको बच्चा वा घरपालुवा जनावरको आवश्यकताहरू।
दुई चोटि जाँच गर्नुहोस् र ठूलो स्वरमा भन्नुहोस् कि कहाँ जानु पर्छ औषधि, विशेष गरी आँखा ड्रप वा कान ड्रपका लागि।
धेरै जसो गोलीहरू मौखिक रूपमा दिइन्छ - जुन फिक्का बच्चाहरूको साथ एक परीक्षा हुन सक्छ। खानाको साथ औषधि मिश्रणको साधारण फिक्स खराब विचार हो। खाना र पेय पदार्थको साथ औषधी नमिसाई यो उत्तम हुन्छ किनभने यसले औषधीको प्रभावकारितामा दखल गर्न वा खुराकलाई पातलो पार्न सक्छ। अमेरिकी पेडियाट्रिक्स एकेडेमीका अनुसार । खाना वा तरलको साथ औषधि मिश्रण गर्नु अघि तपाईंको बच्चाको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस्।
तपाई सही मार्ग अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न, दृढ हुनुहोस्। उद्देश्यको रूपमा सम्पूर्ण गोली निल्नको लागि तिनीहरूलाई निर्देशित गर्नुहोस्, र तिनीहरूले नगरुन्जेल कुर्नुहोस्। यदि उनीहरूले अस्वीकार गरिरह्यो भने, डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सल्लाहको लागि कल गर्नुहोस् जुन तपाईले प्रशासन चलाउन खोज्नु भएको विशेष औषधिको लागि उपयुक्त छ।
घरपालुवा जनावरको साथ, खानाको साथ औषधि जोडी गर्नु उनीहरूलाई यो लिनको निम्ति एक मात्र तरीका हुन सक्छ। जब तपाइँको पशुचिकित्सकले गोली वा तरल औषधि सिफारिस गर्दछ, तपाइँको घरपालुवाले सहय खुराक पाएको निश्चित गर्ने उत्तम तरीकाको बारेमा सल्लाहको लागि सोध्नुहोस्।
जब तपाईंसँग धेरै व्यक्तिहरू छन् वा घरपालुवा जनावरहरू औषधी सेवन गर्दैछन्, यो सजिलो छ तपाईलाई गलत व्यक्तिलाई लागी औषधि दिन सोच्नु भन्दा यो सजिलो छ। औषधि प्रशासन गर्नु अघि अन्तिम चरणको रूपमा, तपाईंले ठीक बिरामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भनि पक्का गर्नका लागि तपाईंले राख्नु भएको औषधिलाई फेरि हेर्नुहोस्।
तपाईं कसरी औषधि सुरक्षित राख्नुहुन्छ?
औषधिहरू सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न केहि तरिकाहरू छन्:
औषधिहरू लक बाकसमा राख्नुहोस्।
लक बक्सलाई तपाईले सक्नुहुने उच्च शेल्फमा राख्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि शेल्फ साधारण कोठामा भान्छाकोठा जस्तो छ, बाथरूम जस्तो एक लक योग्य छैन।
के तपाईंलाई औषधि लकबक्स चाहिन्छ?
यदि तपाईंको घरमा बच्चा र घरपालुवा जनावर छ भने तपाईंलाई औषधि लकबक्स चाहिन्छ, र तपाईंसँग औषधीहरू लक गर्ने अरू कुनै तरिका छैन। यदि तपाइँको घरमा एक लक योग्य क्याबिनेट छ जुन तपाइँको बच्चाहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छ, त्यसले पनि काम गर्दछ।
त्यहाँ अपवादहरू छन्, नोट स्वीनी। यदि तपाईंलाई आफ्नो औषधिमा बारम्बार वा सजिलो पहुँचको आवश्यक पर्दछ, जस्तै जीवन धम्की गर्ने एलर्जीको लागि एपिपेन, यो तपाईंको औषधि लक र कुञ्जीमुनि हुन सुरक्षित छैन, उनी भन्छिन्। त्यो अवस्थामा, औषधीहरू सकेसम्म उच्च राख्नुहोस्।
स्वीनीले यो पनि नोट गर्‍यो कि बाथरूममा औषधी क्याबिनेटहरू अति उच्च हुँदैनन्, र बच्चाहरू सजिलैसँग उनीहरूलाई कुर्सीमा वा काउन्टरको माथिबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। बच्चाहरूले पनि बाथरूममा आफैंलाई लक गर्न सक्छन्, ताकि उनीहरूले के गरिरहेछन् तपाईं देख्न सक्नुहुन्न। उनी भन्छिन् कि तपाईको बेडरूमको कोठामा वा भान्छाकोठाको क्याबिनेटमा तपाईको उच्चतम तखतामा औषधी राख्नुहोस्।
औषधि फ्रिजमा राख्न ठीक छ?
फार्मेसीले सिफारिस गरेमा प्रिस्क्रिप्सन औषधीहरू फ्रिजमा राख्नुहोस्। यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने, विशेष गरी यी औषधिहरूको लागि लकबक्स किन्नुहोस्, र फ्रिजमा भण्डार गर्नुहोस्। थप खर्च खाना खोज्ने बच्चाहरूले दुर्घटनात्मक ओभरडोजको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न लायकको छ।
तपाईं एक बाल निरोधक औषधि क्याबिनेट कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
चाइल्डप्रुफ मेडिसिन क्याबिनेट त्यो हो जुन लक र साँचोको साथ आउँदछ। तपाइँको स्थानीय घर सुधार स्टोर मा एक को लागी सोध्नुहोस्।
औषधि क्याबिनेटहरूको लागि उपलब्ध बालप्रूफ लकहरू दुर्घटनात्मक औषधि ओभरडोजको खतराबाट बच्न पर्याप्त छैनन्। तपाईंको बच्चाहरूको उमेर अनुसार, तिनीहरूले यी लकहरू खोल्न सिक्नेछन्।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार तपाई सुरक्षित औषधि भण्डारण गर्न औषधि लकबक्स पनि किन्न सक्नुहुन्छ।
बच्चाहरूको लागि औषधीको सम्बन्धमा घर सुरक्षित बनाउन हामी के गर्न सक्दछौं?
त्यहाँ दुई महत्त्वपूर्ण चीजहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो घर राख्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरूको लागि सुरक्षित जब यो औषधि आउँछ :
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बच्चाहरू कुनै पनि औषधिहरूमा पुग्न सक्दैनन्-भिटामिन र मलहम सहित।
तपाइँका बच्चाहरूसँग औषधीको बारेमा कुरा गर्नुहोस् - सही तरिका।
सबै औषधिहरू सुरक्षित राख्नुहोस्। यदि तपाईंसँग लकबक्स छैन भने, एउटा खरीद गर्नुहोस् the र यस बीचमा, तपाईंको घरको सब भन्दा माथिल्लो शेल्फमा औषधीहरू भण्डारण गर्नुहोस्। साथै, तपाईंको फार्मासिष्टलाई बाल-प्रतिरोधी क्याप्स प्रदान गर्न भन्नुहोस्। तपाई ढक्कनहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन ट्याब्लेटमा लक हुन प्रयोग गरिन्छ, तर तपाईले उनीहरूको मूल बोतलमा औषधि लिनु पर्छ यसमा पर्ची प्रिस्क्रिप्शन जानकारी सहित। यो गोलियाँ प्रशासन गर्दा गडबडी हुन सक्छ, त्यसैले मूल बोतल सुरक्षित राख्नु सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
यदि तपाईं पर्समा औषधि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो पर्स एक उच्च शेल्फमा राख्नुपर्दछ जब तपाईं यसलाई बोक्नुहुन्न, स्विनी भन्छिन्। यदि तपाइँको बच्चा तपाइँको पर्स मा वरिपरि हेर्न चाहान्छन्, तपाइँ तपाइँ तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ तपाइँको पर्स तपाइँको निजी सम्पत्ति हो र तिनीहरूले त्यहाँ मा हेर्न को लागी छैन।
याद राख्नुहोस्: केवल किनभने एक बोतल, शीशी, वा केस बेचेको छ काउन्टर भन्दा काउन्टर मतलब यो खतरनाक छैन। तपाइँको बच्चाहरूलाई तिनीहरूको जिज्ञासाबाट जोगाउनुहोस् यी चीजहरूलाई उनीहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस्।
साथै, थप वा प्रयोग नगरिएका औषधीहरूको सुरक्षित रूपमा विस्थापन गर्नुहोस् । उनीहरूले कुनै दिन काममा आउने अवसर उनीहरूको बच्चा वा घरपालुवा जनावरले गल्तीले घाइते हुने जोखिमको मोलको छैन।
र, तपाईले कत्ति सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्दैन, राख्नुहोस् विष नियन्त्रण हटलाइन नम्बर तपाईंको घरमा प्रमुख रूपमा प्रदर्शित। नम्बर -2००-२२११२२२ हो, र यसले तपाईंलाई स्थानीय विष नियन्त्रण केन्द्रमा दुर्घटनात्मक ओभरडोजको अवस्थामा जोड्दछ। उनीहरूले तपाईंलाई अर्को के गर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ।
बच्चाहरूसँग औषधीको बारेमा कुरा गर्दै
केबाट सुरू गरौं हैन बच्चाहरूलाई औषधीको बारेमा भन्नुपर्दा। बच्चालाई कहिलै पनि नसोच्नुहोस् कि औषधी क्यान्डी हो वा तपाईंलाई यो मनपर्दछ कि यसलाई लिनको लागि यो मनपर्दछ।
यदि उनीहरू सोच्दछन् कि औषधि क्यान्डी हो (वा यदि उनीहरूले लागू पदार्थ सेवन गरिरहेछन् कि क्यान्डी जस्तो देखिन्छ) भने, उनीहरूले अझ बढी चाहान्छन्, र उनीहरूले बिरामी बनाउने केहि चीज लिन सक्छन्।
बच्चाहरूलाई औषधीको बारेमा सत्य बताउनुहोस्। व्याख्या गर्नुहोस् कि औषधीहरू राम्रो चीज हो जब ठीकसँग लिईन्छ, स्विनी भन्छिन्। तर यदि धेरै लिईन्छ वा यदि आवश्यक छैन भने लिइएको छ भने, हानिकारक परिणामहरू हुन सक्छन्। यो चिकित्सा सुरक्षा रंग पुस्तक कुराकानी सुरु गर्न मद्दत गर्दछ।
बच्चाहरू आफ्ना माता-पिताको नक्कल गर्न मनपराउँदछन्, त्यसैले यदि उनीहरूले तपाईंलाई औषधि लिइरहेको देख्दछन् भने, तिनीहरूले यो प्रयास गर्न सक्छन्। कहिलेकाँही बच्चाहरूले उनीहरूको टाउको दुख्ने वा पेट दुख्ने कुरा भन्छन् ताकि उनीहरूले आफ्ना बाबुआमाले प्रयोग गर्ने गोलीको स्वाद लिन सक्छन्। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले बिरामीको वास्तविक लक्षण देख्नु भएको छ तपाईका बच्चाहरूलाई उपचार गर्न औषधि दिनु भन्दा पहिले। साथै, यो सुनिश्चित गर्न डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग परामर्श लिनुहोस् जुन औषधि तिनीहरूको उमेरका लागि उपयुक्त छ।
औषधीको सम्बन्धमा घरपालुवा जनावरहरूको लागि घर सुरक्षित बनाउन हामी के गर्न सक्दछौं?
तपाई घरको घरपालुवा जनावरहरु लाई सुरक्षित राख्नका लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जब यो औषधीको कुरा आउँछ? पशु चिकित्सक द्वारा निर्देशित नगरे सम्म तिनीहरूलाई नदिनुहोस्।
घरपालुवा जनावरहरू साना केटाकेटीहरू होइनन्, सारा ओचोआ, डीभीएम, टेक्सासको सानो पशु र विदेशी पशुचिकित्साका लागि र पशु चिकित्सा सल्लाहकार भन्छन् doglab.com । आफ्नो पशु चिकित्सक संग कुरा नगरी तिनीहरूलाई मानव औषधि नदिनुहोस्। यो खतरनाक र घातक पनि हुन सक्छ।
हो, केहि नुस्खा र ओभर-द-काउन्टर औषधीहरू जनावरहरूको लागि सुरक्षित छन्। केही कुकुरहरु प्रोजाक निर्धारित छन् उदाहरण को लागी, र छोटो अवधि का चिन्ता औषधीहरु हुन सक्छ तपाईंको पालतू पशुहरूको आतशबाजीको डरको लागि एक राम्रो समाधान । तर यो कल आफ्नै लागि नगर्नुहोस्। अनलाइन अनुसन्धानको कुनै रकम तपाईंको पशु चिकित्सकको वर्षको प्रशिक्षणको लागि विकल्प होइन। कल गर्नुहोस् र उनीहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईंले केही गर्नु अघि तपाईंको पाल्तु जनावरको समस्या झनै नराम्रो हुन्छ।
घरपालुवा जनावरहरुलाई खानेकुराबाट टाढा राख्नुहोस्
अन्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा? पालतु पशुहरूले प्राय: गर्ने अंधाधुन्ध फोराइबाट औषधि र चिकित्सा उपकरणहरू सुरक्षित राख्नुहोस्। घरपालुवा जनावरको साथ, केहि पनि हुन सक्दछ, र प्राय: हुन्छ।
कास्सेन्ड्रा निल्सेन, डीभीएम, वुडस्टक, कनेक्टिकटको अक्टुबर रोड वेटरनरी सेवाहरूको पशु चिकित्सकले लेगोस, बेबी पसिफाइरहरू, एनआरपी डार्ट्स र एक बच्चा येशूलाई पनि घरपालुवा जनावरको पेटबाट हटाए। हालसालै भएको एउटा डरलाग्दो कथाले उनी पाल्तु पशु मालिकले चर्को पप र हिसिंग ध्वनि सुनेको वर्णन गर्दछन्, र उनको छोराको अल्बुटेरल इनहेलरमा अस्ट्रेलियाई गाईवस्तु कुकुरलाई चिम्पिँदै हेर्दै हेरिरहेकी छिन्।
डा। नीलसेन भन्छन् कि अलब्येट्रोलको थोरै मात्राले पनि जीवनलाई जोखिममा पार्ने दुष्प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ। आन्दोलन र कम्पन जस्ता हल्का व्यक्तिहरूबाट, अधिक गम्भीर व्यक्तिहरू जस्तै खतरनाक रूपमा उच्च मुटुको दर, उच्च रक्तचाप, र दौरा। कुकुरले उसको मुटुको दर र रक्तचाप स्थिर नभएसम्म २ in घण्टा अस्पतालमा बिताए।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सबै औषधिहरू तपाईंसँग भएको उच्च शेल्फमा छन्, र तपाईंको जिज्ञासु घरपालुवा जनावरहरूको पहुँच बाहिर। फेरि, लकबक्स एक उत्कृष्ट सावधानी हो जसको मतलब तपाईले आफ्नो पाल्तु जनावरले आकस्मिक ओभरडोजको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
साधारण सावधानीले तपाईंलाई प्रतिकूल औषधी घटनाहरू विरूद्ध उत्कृष्ट सुरक्षा दिन्छ
तपाईको बच्चाहरु र घरपालुवा जनावरहरुलाई आकस्मिक ओभरडोजबाट जोगाउनु महत्वपूर्ण र सजिलो छ। R R को पालना गर्नुहोस् जब तपाईं औषधि प्रशासन गर्नुहुन्छ, र जब तपाईं काम सक्नुहुन्छ, त्यो औषधि लक गर्नुहोस्। यो समय, ध्यान र पैसाको सानो लगानी हो जसले तपाईंलाई दिमागको प्रशस्त शान्ति दिन्छ।
43 सर्वश्रेष्ठ कल्याण उत्पादनहरु तपाइँ Sane र सन्तुलित रहन मद्दत गर्न
वालग्रीन्स प्रिस्क्रिप्सनमा कसरी बचत गर्ने
o नेगेटिभ ब्लड ग्रुपको मतलब के हो?
योजना बी कति पटक तपाइँ यसलाई लिन सक्नुहुन्छ
एक zpack एक साइनस संक्रमण को लागी राम्रो छ?
मैले कति मिलीग्राम वियाग्रा लिनु पर्छ?
z प्याक ५ दिन कसरी लिने